Suppliers blog kunye Factory - China Blog Manufacturers
Yintoni na ivili diamond lokugaya ikomityi?
ngomphathi ku 19-06-18
A diamond uncipha indebe ivili kufuneka ibe sisixhobo diamond yesinyithi-yesondo. Kunye namacandelo diamond welding, okanye ebandayo Siyabandezelwa kwi intsimbi (okanye enye evuthiweyo, ngathi aluminiyamu) umzimba wheel, ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ikomityi. Diamond indebe uncipha amavili badla elifakiweyo ziyeke iintokazi eziphathekayo okanye engile ziyeke ukuba Gr ...
Apho ukuthenga IiCD eziphathekayo lokugaya?
intloko ngesando bush , bush isando plate, ityholo isando isondo , Bush Hammer Tool Suppliers, rotary ityholo ihamile , etyholweni isando ,